कोरोनाबाट बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ? यी लक्षणलाई हल्का रूपमा लिन नहुने विज्ञको सुझाव | गोठालो खबर – सूक्ष्म समाचार , डिजिटलको आधार
कोरोनाबाट बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ? यी लक्षणलाई हल्का रूपमा लिन नहुने विज्ञको सुझाव
२८ पुष २०७८, बुधबार १५:०८
एजेन्सी, २८ पुस । कोरोनाको तेस्रो लहर बालबालिकाका लागि पनि घातक हुन्छ । चिकित्सकहरूले बालबालिकालाई सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएका छन् । बालबालिकामा हुने कुनै पनि लक्षणलाई बेवास्ता गर्नु तपाईंहरुलाई यो समयमा बोझ हुन सक्छ। यदि बच्चामा उच्च ज्वरो र काँप्ने जस्ता लक्षण देखिएमा होसियार हुनुहोस्। कोरोनाको तेस्रो लहरको समयमा कसरी आफ्नो मुटुको टुक्रालाई संक्रमणबाट टाढा राख्ने र सुरक्षित राख्ने भन्ने हामीलाई थाहा दिनुहोस्। आफ्नो सानो बच्चालाई यो कोरोना महामारीबाट बचाउन विशेषज्ञहरूको विशेष टिप्स जानौँ।
१.चिकित्सकहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर अन्य दुई छालभन्दा बढी संक्रामक भएको बताएका छन् । यो बच्चाहरूको लागी खतरनाक पनि छ। उनले पहिलो र दोस्रो लहरमा कोरोना भाइरसको प्रभाव बालबालिकामा नपरेको तर तेस्रो लहरले बालबालिकामा पनि संक्रमण हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसका लागि धेरै सचेत र सचेत हुन जरुरी छ ।
२– चिकित्सकहरूले कोरोना भाइरस संक्रमित बालबालिकामा उच्च ज्वरो आउने र काँप्ने लक्षण देखिएको बताएका छन् । त्यसैले यी लक्षणहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उमेर ११ देखि १७ वर्षसम्म रहेको छ । दुई वर्ष मुनिका बालबालिकामा पनि यस्ता लक्षण देखिने गरेको उनीहरू बताउँछन् । यसका विशेषताहरू डेल्टा भेरियन्टभन्दा अलि फरक रहेका छन् । त्यसैले थप सचेत हुन जरुरी छ । यो डेल्टाको विपरीत, ओमिक्रोनका बिरामीहरूमा स्वाद र गन्धको कमी सामान्य छैन । तर, अधिकांश बालबालिकालाई भेन्टिलेसनको आवश्यकता नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
३– बालबालिकामा देखिने यो रोगको सामान्य लक्षणलाई पटक्कै बेवास्ता गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । सामान्य लक्षण देखिएमा तुरुन्तै डाक्टरसँग सम्पर्क गरी परामर्श लिएर मात्र उपचार गराउनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । उच्च ज्वरो आएमा अन्य बिरामीजस्तै नवजात शिशुलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छैन । चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र बालबालिकालाई अस्पतालमा भर्ना गर्न उनीहरू सुझाउँछन् । कोरोनाबारे थप आत्तिनुभन्दा पनि सचेत हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसको लागि कोरोना निर्देशनहरू कडाइका साथ पालना गर्न आवश्यक छ। बालबालिकामा संक्रमणको गम्भीरता डेल्टा भेरियन्टको जस्तै छ।